Nhanganyaya naTanella Boni we "Point de suture" naGrobli Zirignon - Afrikhepri Fondation
svondo, june 13, 2021
Musumo naTanella Boni we "Point de suture" naGrobli Zirignon
Kuverenga: 5 mins
DMushure mekuunganidza kwake kwekutanga, Epaves (1981), Grobli Zirignon akaisa toni. Akazviti ndiri mudetembi wekudzingwa, wekudzungaira kusingaperi. Akange aimba nezve kuvapo kwemurume asina kuverengerwa mukutsvaga kubatana kwake kwakarasika. Kupararira (1982) kwaive kwakasimudzira dingindira rekukoromoka kwekuvapo kwemunhu "akakandwa semafuro" muchadenga, mukutarisira kwese kwese kufa murenje risinganzwisisike. Zvese zvinoitika sekunge nyanduri, munzira ino, akavezwa, kunge protozoan, akatenderedza pakati penzvimbo, akaiswa pakati pekufa, kuvapo, uye hupenyu chaihwo, kukwezva uku kusingaperi.
Pano nepano, mudetembi anoradzika ruzhinji, rwakagadzirwazve stitch pane ganda rekuvapo rakakuvadzwa kusvika parufu. Asi izwi rakasimba ingori balm inoshambidza ronda remuviri apo moyo uchiri kubuda ropa. Kuvepo kunova, panguva imwecheteyo, kurapa kwenguva refu.
Mubhokisi rake remushonga, nyanduri aripo akaisa mufaro wake uye wedu, kungodonha kweruzivo rwega mune maviri kana matatu mapeji. Ipapo yakaisvonaka bouquet yezvakashandurwa zvidimbu zve ek-sistence, yeRimi, yezivo, yaMwari, yeimwe.
Pazasi pekhemisi, zvimedu zvehungwaru zvakafukidzwa neguruva re psychoanalysis.
Chese chinhu chinoramba chakabatanidzwa mukufamba kwetsvarakadenga yeDogon ngano. Pano, ipapo, rwizi rweHeraclitus rwunogumira neKierkegardian kuora mwoyo kana kuve-ikoko kwaHeidegger. Iko kuvapo mutambo unoitwa kwete pakati pekuve uye kusava nechinhu, asi pane pakati pekusavapo uye kupenga. Uye nyanduri ari kumwe kunhu, pakati peSade naKant. Nekudaro, iyo inodzungaira jackal chimiro, Ogo, inoita kunge inotonga zvese izvi. Point de suture hachisi chinhu kunze kwerwiyo rwekutanga kutsvaga kweasinga tsanangurike kaviri. Pakatenderedza zvidimbu pane chisina chinhu, peji risina chinhu, madziro erufu ayo aripo anogara achirovera uye nekudaro iwo mutserendende unofanirwa kuburitswa.
"Tinofanira kuuraya rufu
tinofanira kuuraya rufu
rufu runofanira kuurawa ”.
Asi kuuraya rufu sei kana hondo iri viaticum, kana Polemos, sema pre-Socrates aigara achitaura, ndiye Baba vezvinhu zvese? Ek-sistant, uyu wekudzingwa nekusingaperi, haana sarudzo. Akayambuka pakati pezvirambidzo zviviri: iyo yawning vault yerufu iyo isingafi nehondo yekusingaperi. Pamwe anowira mu "hwaro hwaro" wevapenyu vakafa kana neushingi uye nekuzvikudza anopa jasi rake-mutongo weupenyu. Asi mune ese mamiriro, anofamba asina chinangwa, semurindi akavimbika kunzvimbo yake kana shiri yakavharirwa. Kusafara, kunyimwa kunakirwa, kunetseka.
Kana zvikaitika kuti abuda pane dzungu iri rinodiwa, anotwasuka, ane mutoro seI. Ichaita mabhuru uye madenderedzwa pamusoro pegungwa, uyu akakosha Mumwe ane chimiro ndiye anodya, anodonhedza, anopinda amai.
Rutivi rwechivanze. Mheremhere yeMutauro, izvi zvinotambudza zvinoratidza kuti hapana munhu anotora, zvinoumba corollary isingadzivisike yechero kudzingwa. Kunze kwekunge ek-sistant ataura zvinonzwika kana zvichidikanwa, pasina kana hanya nekuvapo uye kutarisisa kweumwe, chero iye achingoita seyeye ega museve, sekisheni rake. Murege afare, achifamba senge tambo inofamba pane tambo, zvirinani, rickety caiman-zambuko, rakamiswa pakati pedenga nepasi pamusoro pegungwa.
Divi rebindu. Tinofanira kufungidzira mudetembi aripo saRobinson Crusoe pasina Chishanu chake. Yakatsemurwa pese pese, ichapwanya matombo murenje renzvimbo. Iye achazvipira muviri nemweya, semunhu akasununguka, kukunda "polder" asingatyisidzirwe nekusingaperi nekuitwa renje. Achakura ipapo kwete tulip asi "irozi / ruva rejecha", iro raachakurumidza kuziva.
Saka achave nezororo rekuona, nekuda kwemamiriro ekunze akanaka, "kupenya" kwedenga pasi. Zvirongwa zvishoma zveparadhiso zvichavhurika patsoka dzayo. Illusory uye chimerical nzvimbo, mwenje kubva kumwe kunhu. Achavabhabhatidza Chokwadi, Kutenda, Mwari… kunyepedzera uku kwaachada kusvika pakufa. Yakanakisa nyaya yerudo, ine bhonasi yakawedzerwa yezuva rakarasika. Mwari, muchokwadi, "yedu yakakwana yakapetwa" uyezve inokwezva pfungwa, acharamba asipo. Zvachose. Tete-akarota tete, naBaba, hazviitike.
Uye chichava fungidziro ine mbiri yeaartist ini mukurongeka kweiyo yekufananidzira. Anenge ave akarasa zvese kunze kwehana yakashata yekunyengedza kwese.
Ipapo mudetembi achava muporofita:
"Ndini nhume yaJambwa."
uye kune nyika ini yandinounza
wekupa hupenyu hwekubwinya ”.
Uye anonzwa kufara nezvake, iye uyo, ari pamuchinjikwa, ane nguva yekupa ziso rekuziva kune vamwe vake mumaoko nguva dzese: Socrates akarurama, Jesu anotapira, Mandela akadzingwa hupenyu.
Achagara pachigaro chaMwari chisina chinhu, achave ne "kutonga kwemweya, yakagara pamubhedha weichi, ichi" chinhu chinotyisa "chakaiswa ipapo, chisina Munyori, pakati pe" Crossroads ". Iyi Promethean mission ndiyo nzvimbo yekuyananisa iwe pachako.
Izwi iri richava basa remuartist aripo kana kuti harizove chinhu. Asi "kune imwe" sekuda kwaLacan. Ichi ndicho chikonzero iye aripo murapi achakunda, kunyangwe zvese, muyedzo wekuzviuraya.
Grobli haatombobata. Anogara akasvinirwa "kumubvunzo".
Tanella Boni, Chirevo cheSuture Point
Stitches (nhetembo dema)
Tenga € 6,49
Yakapedzisira kugadziridzwa muna June 13, 2021 2:32
Zvakavanzika gumi zveBudiriro uye Rugare rwemukati - Wayne Dyer (Audio)
Tarisa Empire Series 1 Season (2015)
Kudzidzisa unzenza maitiro mu 5 kirasi muCameroon?
Bhuku reTibetan revakafa (PDF)
Chikwereti, dambudziko, kushayikwa - Ndiani anogadzira mari yacho?